Isikhokelo sokukhetha iTable Pong-Table
Ukuthabatha Itafile yePing-Pong
Oko Ufuna Nento Oyifunayo ...
Ngexesha elithile okanye kwelinye, mhlawumbi uya kuba semarike ukuthenga itafile yakho yetheyibhile yetafile .
Okokuqala, libale izimangalo ezinkulu zabavelisi. Ngaphandle kokuba udlala kakade kumgangatho welizwe okanye wesizwe, akunakwenzeka ukuba udinga ithala letheyibhile kakhulu.
Ukuba yitheyibhile yakho yokuqala kwintsapho, hamba ukuya ekupheleni kweemarike uze ushiye intsapho yakho isihogo ngaphandle kwetafile yeping-pong ngelixa befunda indlela yokudlala.
Ukuba umntu osapho usenza isigqibo sokufumana ingqalelo ngokubhekiselele kwitheyibhile yabo ye-tennis, kufuneka ulungele ukutshintsha itafile ezigqityiweyo kunye nomzekelo omhle ophakathi kwendawo yokubala eya kubonwa kwaye uyayilungisa kakuhle.
I-Ping-Pong yeTable Table Factor: Ukuhamba
Yenza isigqibo sokuba uya kushiya itafile isetyenziswe ngokusisigxina okanye nokuba uya kubeka ipakisha kwaye uyibeke. Ukuba uya kukhwela kwaye uhla rhoqo, uya kufuna into elula ukuyilungisa, mhlawumbi imodeli enokuthi iphathwe ngumntu oyedwa, kunye nabaxhasi ukuvumela ukuba uhambe ngokulula. Iibhetele ezigciniweyo ezifanelekileyo zihamba ngamabhuleki angasetyenziswa ukuyeka ithala elijikelezayo xa lisetyenziswe.
I-Ping-Pong Itheyibhile yeThebula: Ubuninzi
Abanye abadlali bayakuchaza ukuba iithebula zeetennis zeetafile kuphela eziphezulu ze-intshi eziphezulu zifanele ukuthenga. Nangona kuyi nyaniso ukuba ezi tebhile zinika i-nice, i-bounce, i-0.75-intshi ephezulu iqhosha lifana.
Abadlali abathambileyo bezokutyelela baya kufuna i-inch intshi ephezulu phezulu ukuze babe neetafile ezifanayo kwizinto abaza kudlala ngazo kwii-tournaments.
I-Ping-Pong Itheyibhile yeThebula: Iimpawu ezintle
Qinisekisa ukuba itafile ye-ping-pong oyithenga ineemilenze ezinamandla ezinamandla kunye nokuxhaswa, njengoko mhlawumbi kuya kuthatha ukubetha kwiminyaka embalwa ezayo.
Enye into ebalulekileyo yokujonga umlenze ongezantsi emilenzeni. Oku kunokuba kuncedo xa umgangatho odlala kuwo awukho mgangatho; amanqanaba angakhishwa ngaphakathi nangaphandle ukuze agcine ukuphakama kwetafile kwi-intshi ezingama-30 ngaphantsi komgangatho.
I-Ping-Pong yeTable Table Factor: Ukulinganisa
Jonga izinto ezibhekiselwe kuzo. Beka iliso lakho ekuphakameni kwetafile ukusuka kumacala onke etafileni kwaye ujonge nayiphi na ukugoba okanye ukulwa okungachaphazela ukuqhuma kwebhola. I-1 yemitha okanye i-1-yard yezinga elide lomoya lingaba luncedo kakhulu ekuhloleni ukuba i-table above is not flat.
I-Ping-Pong yeTable Table Factor: I-Net
Khangela umnatha kunye neziqhotyoshelwano ezinesithambiso esithambileyo apho zifakela itafile njengokuba zingabonakali. Mhlawumbi unokubeka i-sticky clink if you have. Kwakhona, qinisekisa ukuba izibambo ezisetyenziswe ngumnatha musa ukumba kwindawo okanye ngaphantsi kwetafile. Kwaye, ewe, musa ukuhudula amanqamle enetha xa uthatha inetha okanye uyifake!
Kuthiwani ngeetafile zangaphandle zeping-pong?
Iitheyibhile zangaphandle zetheyibhile zangaphandle ziza kwiifom ezahlukeneyo - ngokuqhelekileyo imilenze kunye nokuxhaswa kungenawo amanzi / kukhuselekile ukukhupha kwizinto. I-table yangempela yintlanzi ingaba yinyithi, inkuni eneengubo ezingenamanzi, kunye nezinye iindidi zokwakheka kwamatye. Njengesiqhelo, umgangatho ongcono kufuneka uhlawule ngaphezulu.
Into ebaluleke kakhulu kumdlali wokuzonwabisa kukuba ingaba ushiya itafile ngaphandle kwomoya kunye nemvula.
Kusenokwenzeka ukuba ufanele uthenge itafile efanelekileyo yekhwalithi ukwenzela ukuba ufumane ukulungiswa kwemozulu oyifunayo. Kubadlali abathintekayo, kubaluleke nakakhulu ukuba i-table box ye-tennis yangaphandle ifana neyetafile zangaphakathi. Ngayiphi na indlela, kuya kuba yinto efanelekileyo ukufumana ikhava yeplastiki ye-opaque ekuncedeni ukuthintela itafile kunye nokulwa kwelanga.
Ndifanele ndivume, ngaphandle kwezi zinto ziseko, andinayo inkcazelo eninzi malunga nale ndawo ethile yetafile yeetennis yetafile. Ngoko ndaya kwi-Forum yeTable Tennis Tennis, kwaye yabona kwaye, le nkcazelo elandelayo ifunyenwe!
Ngokutsho kwe- stevebtx , iitheyibhile zetsimbi zifunyenwe zibe zizinto ezincinci kwaye zihamba kancane kuneetrafile eziqhelekileyo, kwaye umphumo we-spin uncinci. i-mzwang yongezelela ukuba itafile zeTyhubhuza ngaphandle kwitheyibhile ye-tennis yayinokuhlukana okuhlukeneyo.
Ukuvumelana ngokubanzi kubonakala ngathi ukuba ngaphandle kokuba ufune itafile ehlala ngaphandle ngaphandle kwexesha, ungcono ukuthenga itheyibhile yangaphakathi kwaye uyithathe ngaphandle ukudlala ngexesha lemozulu elihle kuphela.
Kwakhona kubonakala ngathi abaninzi abantu abadlala ngaphandle bahlala bexesha elihle, ngakumbi xa isimo sezulu sinomoya kwaye ibhola ingenza izinto ezingaqhelekanga!
Unomdla wokuthenga i-Outdoor Table? Thenga ngokuthe ngqo
Inyosi, ndiyichitha iThebhile
Kwabo abaye banciphisa indawo ekhaya, unokuqwalasela ukuthengwa kwetafile ye-ping-pong table. Ezi tafile zihlala ziphakame ngokufana neetafile eziqhelekileyo, kodwa zineendawo ezincinci zokudlala .
Ukuthabatha kwam kwitafile yile: Ukuba ucinga ukuba uza kudlala i-tennis ye-tennis yokuzonwabisa ekhaya, kwaye ungadlala imincintiswano, iilagues okanye i-pennants, ngoko-ke le tafile ye-ping-pong ingaba yindlela enkulu yokuchitha iiyure ezimbalwa kunye nosapho kunye nabahlobo.
Kodwa ukuba ucinga ukucinga ngokungathí sina ngemidlalo, okanye uqala nje kwaye awuqinisekanga okwangoku, ndingakucebisa ukuba ungathengi enye yale tafile - unokuthatha imichimo embi kakhulu xa udlala kuwo rhoqo. Ngenxa yokuba ububanzi buhluke, yintoni ukubeka kakuhle kwitheyibhile ehambelanayo kungabi kuhle kwietafile eziqhelekileyo. Kananjalo ungagqiba ukushaya i-spinny kakhulu okanye ithambileyo ukuze uhlasele ibhola kwitafile encinane, kwaye usebenzise ukubetha ngqo ngenxa yobubanzi obuphantsi.
Ngoko gcina amacwecwe amancinci ukuzonwabisa kunye nosapho, kwaye ukuba unomdla ngokumalunga nokuncintisana, ungachitheli ixesha elininzi kubo.
Unomdla kwiTables Ping-Pong Tables? Thenga ngokuthe ngqo
Ukuba usenayo i-snooker, ibhilididi okanye itafile yeplati ekhaya, kunokuyilingela ukuthenga i-table ithennti yokuguqulwa phezulu. Ukuguqulwa kweping-pong phezulu ngokusemgangathweni ngumzamo wabakhiqizi ukufumana amancinci amancinci emidlalo yentsapho ngokukuvumela ukuba ubeke itafile yethenti edlala phezulu phezulu kwetafula, ibhilididi okanye i-pool table. Uvakala kakuhle kumfundiso, kunene?
Ewe, kuxhomekeke kubukhulu betafile yakho. Ubungakanani obusemgangathweni obuseburhulumenteni yetafile e-snooker ziyi-11 ngeenyawo nge-5-foot feet-10, ngelixa itafile yetheyibhile yetafile i-9 inyawo ngeenyawo ezi-5. Yenza ingxaki? Ewe, uya kufumana kunzima ukuza kufutshane neebhola ezifutshane kunye neenyawo ezongezelelweyo zeetafile ezikhuphayo ngaphantsi kwelinye icala kwicala lokuguqulwa. Yongeza into yokuba ubude obuphakanyisiweyo beetafile ezithengayo ziphakathi kwama-33 ½ intshi (85.1cm) ukuya kuma-intshi angu-34 ½ (87.6cm), ngelixa itheta yetheyibhile itafile kufuneka ibe ngama-intshi angama-30 (76cm) phezulu kwaye unomnye ingxaki. Ngaphandle kokuba ucwangcise ukudlala ezinqabeni zeqonga, uza kudlala kwindawo ephezulu kakhulu.
Ukuba unetafile encinci kunye nezantsi (iitafile eziqhelekileyo zeetafile eziqhelekileyo ziyii-10 ngeenyawo ezi-5, ii-9 zii-4 kunye neenyawo ezinyaweni, okanye zii-8 ngeenyawo ezi-4, kunye neendawo eziphakamileyo ezingama-29 ¼ intshi ukuya kwi-intshi ezingama-31), ungase uhambe kunye nokuguqulwa okuphezulu.
Zama ukuqwalasela ukuqhuma kwebhola kunye nokuguqulwa okuphezulu kwitheyibhile ye-billiard, ukuze ukhangele ukuba ngaba iyanqanda ukuphakama okuchanekileyo kwe-23cm xa ihlaselwa ekuphakameni kwe-30cm.
Unomdla kwiTable Tennis Conversion Tops? Thenga ngokuthe ngqo
Ingozi, Ngaba uRobinson!
NjengoRick Anderson uboniswe kwiforum, iitheyibhile zeetafile zeetable zingabungozi apho abantwana bekhathazekile. Okokuqala, kukho ingozi yetafile ekugqibeleni xa ixutywa kwaye omnye umntu uyinika iphosi kwindawo engafanelekanga. Kukho nengozi yetafile ukuwa xa ubunzima obubekwe phezu kwayo, okanye kwindawo engafanelekanga (njengendawo ekufutshane nomnatha kubaninzi beetafile.
Ekugqibeleni, kukho ingozi echaphazelekayo ekuvuleni iitafile ukuze zisetyenziswe kule mizekelo apho zombini iinqununu zetafile zidibeneyo phakathi. Ukuba elinye icala letafile lilahla kuqala, kwaye elinye icala liyehliswa, ummandla phakathi kwamacangca amabini unomtsalane onjenge-guillotine onokuba yingozi xa umntwana ejikeleze loo ndawo ngelo xesha. Nangona imodeli eneesahlulo ezihlukeneyo zodwa ingaba yingozi xa umntwana omncinci ekwazi ukuvumela itafile phantsi ngokungalindelekanga.
Kungaba yinto efanelekileyo ukuqiniseka ukuba itafile kwindawo yokuma ikhuselekile ukwenzela ukuba nayiphi na abantwana abakwaziyo ukuyeka phantsi kwetafile. Ukufundisa nayiphi na abantwana (kunye nabantu abadala!) Malunga neengozi ezibandakanyeka ekumiseni nasekukhipheni itafile kuya kuba yinto enhle yokwenza njalo.
Ngoko ke unayo, isiKhokelo sikaGreg sokukhetha iTheyibhile yeTable Table. Khetha ngokuhlakanipha kwaye uya kuqiniseka ukuba ufumane iminyaka enkonzweni enhle, kwaye unethemba lokuba unyaka weenkonzo ezilungileyo, ukusuka kwitheyibhile yakho yetheyibhile ethembekileyo.
Unomdla kwiTable Table Tables? Thenga ngokuthe ngqo
Inomdla kwiTable Tables Table Tennis? Thenga ngokuthe ngqo
Inomdla kwiThabo Elininzi (DHS) Iitheyibhile zeTable Table? Thenga ngokuthe ngqo
Unomdla kwiiTables zeTable Table Table? Thenga ngokuthe ngqo
Unomdla kwiiTables zeTable zeTola zeJoola ? Thenga ngokuthe ngqo
Unomdla kwiTables Table Tennis Tables? Thenga ngokuthe ngqo
Unomdla kuTetler Table Table Tables? Thelekisa ixabiso
Ukuphononongwa kwi-Doger Dog Leash kwiBhakeki yakho
Ikhalenda yeZakhono kunye neKhalenda
Indlela yokusebenzisa 'iParecer'
IGable kunye neGable Wall
Ukuqulunqwa (ingqiqo kunye neengqinisiso)
I-Basics yeRandonee Skiing
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya: Ukungqingwa kweLoubbourg (1758)
10 Amazwi malunga neJellyfish
Indlela yokukhokela iNgcaciso yeKlabhu yeNcwadi
Ukunyamekela kwePlenary: Vakashela iindawo zamangcwaba uze uthandazele abafileyo
Yintoni iAsh ngoLwesithathu?
Funda NjengaMongameli: Uluhlu luka-2016 loLwazi lokuFunda lwe-Obama
Intsingiselo ye-'Nani 'ngesiJapan
Quistice Day Quotes
Indlela yokuKhula amaBristuth
I-Earth Space and Dream of the Future
I-Slender Man Stabbing Case